Kutheni uYesu wahlamba iinyawo zabafundi bakhe Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Kungenxa yokuba uYesu wahlamba iinyawo zabafundi bakhe. Ukuhlanjwa kweenyawo kubhekisa ku isiko lamaJuda lakudala apho umninindlu, ebonisa umoya wokubuka iindwendwe, wamnika isicaka nesitya samanzi sokuhlamba iinyawo. Kwiindawo ezininzi zeTestamente eNdala kunokwenzeka ukufumana Iivesi ezibonisa isiko elinjalo njenge IGenesis 18: 4 y USamuweli 25:41.
Nangona kunjalo, kwesi sihlandlo, uYesu wasebenzisa eli siko ukuthumela imiyalezo eyahlukeneyo kubafundi bakhe. Ukuba ufuna ukwazi ukuba siyintoni na isizathu kwakutheni ukuze uYesu ahlambe iinyawo zabafundi bakhe, qhubeka ufunda eli nqaku.
1 Kwakutheni ukuze uYesu ahlambe iinyawo zabafundi bakhe
1.1 1. Ukubeka umzekelo wendlela yokunceda abanye
1.2 2. Ukuxolela izono zethu
1.3 3. Ukubonakalisa uthando lwakhe olungunaphakade kuthi
1.4 4. Misela umzekelo wokuthobeka
1.5 5. Ukubonisa umngcatshi ukuba wayeyazi inyaniso
Kwakutheni ukuze uYesu ahlambe iinyawo zabafundi bakhe
Ngaphambi kokuba ndiqale ukucacisa izizathu ezakhokelela ku hlamba iinyawo zabafundi bakhe, kungcono ukuba uzifundele ezi ndinyana:
Phambi komthendeleko wepasika, esazi uYesu ukuba lifikile ilixa lokuba anduluke kweli hlabathi, aye kuYise, njengokuba wayebathanda abakhe. el mundo, wabathanda kwada kwasekupheleni. Kwaye xa besitya, ngathi usathana wayesele ebeke entliziyweni kaJudas Sikariyoti kaSimon ukuba amnikele, esazi uYesu ukuba uYise umnike zonke izinto ezandleni zakhe, nokuba wayevela kuThixo kwaye uThixo wayeza, waphakama esidlweni, wakhulula thabatha ingubo, ubhinqe itawuli; Wagalela amanzi esityeni sokuhlambela, waqalisa ukuzihlamba iinyawo zabafundi nokuzomisa ngetawuli awayeyibhinqile. Akufika kuSimon Petros, wathi kuye:
"Nkosi, ingaba ungazihlamba iinyawo zam?"
Waphendula uYesu wathi kuye:
"Into endiyenzayo, awuyiqondi ngoku, kodwa uya kuyiqonda kamva."
UPetros wathi kuye:
"Awusoze uzihlambe iinyawo zam."
Waphendula uYesu wathi:
"Ukuba andikuhlambi, awuzukuba nanxaxheba nam."
USimon Petros wathi kuye:
"Mnumzana, hayi iinyawo zam zodwa, kodwa nezandla kunye nentloko ngokunjalo."
UYesu wathi kuye:
-Lowo uhlanjiweyo kufuneka ahlambe iinyawo zakhe, kuba yonke into ihlambulukile; Ucocekile nangona kungenjalo.
Wayesazi ukuba ngubani owayezakuyihambisa; Kungenxa yoko le nto wathi: "Anihlambulukanga nonke."
Ngoko, xeshikweni ebehlambile iinyawo zabo, wathabatha ingubo yakhe, wabuyela etafileni, wathi,
"Uyayazi into endiyenzileyo kuwe?" Nina ukundibiza nithi ndinguMfundisi, nithi ndiyiNkosi; niyalungisa ukutsho, ngokuba kunjalo. Kuba, ukuba mna, ndiyiNkosi, ndinguMfundisi, ndithe ndahlamba iinyawo zenu, nani nifanele ukuhlambana iinyawo, ngokuba ndininike umzekelo, ukuze, njengoko ndenze ngako kuni, nenjenjalo nani. Inene, inene, ndithi kuni, Isicaka asikho inkulu kune inkosi yakhe, umthunywa umkhulu kunalowo umthumileyo. Ukuba niyazazi ezi zinto, ninoyolo ukuba nithi nizenze.
Andithethi ngani nonke; Ndiyabazi abo ndibanyulileyo. Kodwa isiBhalo masizalisekiswe: "Lowo udla isonka nam undiphakamisele unyawo lwakhe."
Yoh 13: 1-18
Njengoko ubona, xa u Yesu wahlamba iinyawo zabafundi bakhe yayingengomboniso nje wokubuk 'iindwendwe, kodwa Ndifuna ukuhambisa iinyaniso ezinzulu kakhulu kuthi. Apha sibabonisa:
1. Ukubeka umzekelo wendlela yokunceda abanye
Xa uYesu waqalisa ukuhlamba iinyawo zabafundi bakhe, wasinika ngokucacileyo umzekelo wendlela yokuphatha abanye. Ngale ndlela usenza sibone ukuba lowo ulandela umendo wakhe ngulo ulandela ezinyathelweni zakhe.
2. Ukuxolela izono zethu
El Amanzi amele ubunyulu ngelixa polvo de los pies representa isono. Ngale nto ilula esenza ukuba siqonde ukuba nguye ococa izono zethu.
3. Ukubonakalisa uthando lwakhe olungunaphakade kuthi
Ukucoca iinyawo zomntu onezimdaka kuyacaca umzekelo wokuba umkhathalele kangakanani umntu. Ngale ndlela, wathetha ngomqondiso olula ukuba yakhe uthando lwalungenamda kwaye alunamda. Kungenxa yoko le nto wanikela ngobomi bakhe ngenxa yethu.
4. Misela umzekelo wokuthobeka
Ngokuqinisekileyo nawuphi na umfundi uya kukulungela ukuhlamba iinyawo zoNyana kaThixo. Nangona kunjalo, yayinguYesu owasithathayo waza waqalisa ukuhlamba iinyawo zabafundi bakhe. Ngale nto ilula, wabanika ukuba bayiqonde loo nto Akufuneki kubekho umahluko phakathi komnye nomnye xa kufikwa ekuboniseni uthando nomdla.
5. Ukubonisa umngcatshi ukuba wayeyazi inyaniso
Kwaye esazi ukuba ungubani na umngcatshi nokuba wenze ntoni nxamnye naye, waguqa wahlamba iinyawo zakhe njengomnye wabo. Oku kungqina kwakhona ukuba UYesu wayethanda ngokungathandabuzekiyo.
Nangona kunjalo, ngelixa ehlamba iinyawo zikaPeter, wathetha la mazwi alandelayo: "Ngoku nihlambulukile, kodwa aninjalo nonke." Ngele ndlela wamazisa uYuda ngokungcatshwa kwakhe.
Ezi zezona zizathu ziphambili zokuba uYesu ahlambe iinyawo zabafundi bakhe. Uthando, ukuthobeka nomzekelo. Ngale ndlela siyayazi into eyayilindelwe yiNkosi yethu.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kuwe. Ukuba unomdla wokwazi indlela uYesu awayebabiza ngayo abafundi bakhe, Sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela fumanisa kwi-intanethi.